निर्वाचन आयोगले बाबुराम भट्टराईलाई कस्तो कारवाही गर्नसक्छ ?
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आज मतदान गर्ने क्रममा मतसंकेत गरेको मतपत्र सार्वजनिक गरेपछि निर्वाचन आयोगले उनलाई चौबिस घण्टे स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
भट्टराईले पठाएको जवाफ चिक्त नबुझेमा आयोगले उनलाई कारवाही गर्न सक्छ । कारवाहीको व्यवस्था निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ नै गरिएको छ ।
भट्टराईले आज स्थानीय तह निर्वाचनको सिलसिलामा गृह जिल्ला गोरखामा मतदान गर्दा मतसंकेत गरेको मतपत्रको फोटो खिची सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । सोही कुरालाई लिएर आज नै आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
यदी भट्टराईले पठाएको जवाफ चित्त नबुझेमा आयोगले उनलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री निवासमा बाबुराम- उपेन्द्रको एकल हस्ताक्षरमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगर्नुस्
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायत सो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफनो पक्षमा पार्टी भित्र बहुमत रहेको जनाउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्